ဘယ်လို WINDOWS နဲ့စနစ် DISK ကို BACKUP လုပ်ထားပါစေနှင့် (ဘာမှလျှင်) ကပြန်ပေးမည်မှ - ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျ - 2019
Backup တွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေကို (လည်း backup လုပ်ထားကိုခေါ်), နှင့်အခြားမည်သူမဆိုမ: ရှိပါသည်အသုံးပြုသူများကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှအမြဲတမ်းနေ့နှင့်အသုံးပြုသူများသည်၏ဒုတိယအုပ်စုသည်ပထမဦးဆုံးဖြစ်လာလာ ...
ကောင်းပြီ🙂ကငျြ့ဝတျလိုင်းအထက်တွင် Windows ကိုပြန်-up, မိတ္တူအပေါ်အားကိုးကြောင်းသုံးစွဲသူများက (သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူမည်သည့်အရေးပေါ်ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခု) သတိပေးရန်, ထိုအချက်ကိုသာညွှန်ကြားခဲ့သည်။ တကယ်တော့မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်မဆိုအဆိုပါ hard drive ကိုနှင့်အတူပြဿနာများ, ဒါပေါ်မှာ။ Trouble လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အချက်အလက်ရရှိမှု "ပိတ်ဖို့" နိုငျသညျ။ သူတို့ကိုသင်ဆုံးရှုံးရပေမယ့်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ရှည်လျားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်တောင် ...
ကတက်ကျောထောက်နောက်ခံပြုခံခဲ့ရလျှင်နောက်ထပ်အရာ - ယင်း disk ကို "ပျံသန်း" အသစ်ဝယ်လျှင်ပင်, ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် 20-30 မိနစ်။ တိတ်တဆိတ်သူတို့၏စာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအမှုအရာ ...
အဘယ်ကြောင့်ငါ Windows ကိုပြန်-up, မိတ္တူဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဖို့အကြံပြုကြပါဘူး။
ကကျရှုံးခြင်းဖြစ်ထွက်လှည့်, အခုသငျသညျအရာတစ်ခုခု (အတူတူပင်ဆိုပရိုဂရမ်သက်ဆိုင်) အလုပ်လုပ်နေရပ်တန့်ပြီ - ဒီမိတ္တူကိုသာအချို့သောကိစ္စများတွင်, ဥပမာအားဖြင့်ယာဉ်မောင်းကို install ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကိုယ့် "add-on" ဟုအဆိုပါ browser မှာစာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်လှစ်သောသူအချို့ကြော်ငြာတက်ခူးကြပေလိမ့်မည်။ ဤအမှုကိစ္စများတွင်, သင်လျင်မြန်စွာသည်၎င်း၏ယခင်ပြည်နယ်မှစနစ်ပြန်လှိမ့်နဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်လျှင်သင်တို့မူကားတစ်ဦးကကွန်ပျူတာ (လက်ပ်တော့ပ်) (စနစ် drive ပေါ်တွင်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးဖိုင်များကိုသို့မဟုတ်တစ်ဝက်) အားလုံးမှာ drive ကိုကြည့်ဖို့ငြိမ်းလိမ့်မည်ရှိသည် - ဒီမိတ္တူကိုအဘယ်သူမျှမအကူအညီနဲ့ရှိကြောင်း ...
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမပါလျှင်ထိုကွောငျ့, ပဲကစားသူ - ကိုယ်ကျင့်တရားရိုးရှင်းတစ်ဦးမိတ္တူစေ!
ကောင်းပြီ, အမှန်တကယ်ယခုကဲ့သို့သော program တစ်ခုများစွာ (ရာပေါင်းများစွာမဟုတ်လျှင်) လည်းရှိပါသေးတယ်။ သူတို့တွင်နှစ်ဦးစလုံးပေးဆောင်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဗားရှင်းရှိပါတယ်။ သက်သေပြမယ့်အစီအစဉ်ကို (နှင့်အခြားအသုံးပြုသူများ :)) - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ (အနည်းဆုံးအဓိကကဲ့သို့) ကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါသည်။
ယေဘုယျအားငါအစီအစဉ် (သုံးကွဲပြားခြားနားသောစျေးသည်) ၏သုံးခုထွက် single မယ်လို့:
1) AOMEI Backupper နျ Standard
system ကို backup လုပ်ထားများအတွက်အကောင်းဆုံး tools တွေတစ်ခုမှာ။ (7, 8, 10) OS ကို Windows ကိုအားလုံးလူကြိုက်များအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်အခမဲ့, program ကိုအချိန်-စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကဆောင်းပါးတစ်ခုထပ်မံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခွဲဝေမည်။
2) Acronis True Image တို့
သင်ဒီမှာဒီ program အကြောင်းကိုဤဆောင်းပါးကိုတွေ့နိုင်ပါသည်:
3) Paragon Backup ကို & Recovery ကိုအခမဲ့ Edition ကို
hard drive တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ရိုးရိုးသားသား, ကအတွေ့အကြုံကိုသည်အထိအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါတယ် (သို့သော်သူကအများကြီးချီးကျူးထောပနာဖြစ်ပါတယ်) ။
စနစ် drive ကိုတစ် backup လုပ်ထားမိတ္တူအောင်လုပ်နည်း
ကျနော်တို့ AOMEI Backupper နျ Standard အစီအစဉ်ကိုပြီးသားတင်ဖြစ်ပြီးသင်ထည့်သွင်းထားသောယူဆ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးနောက်သင်အပိုင်း "Backup ကို" သွားပါနှင့် option ကို System ကို Backup ကို select လုပ်ပါဖို့လိုတယ် (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 1, Windows ကိုကူးယူ ... ) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 1. Backup ကို
Next ကိုသငျသညျနှစျခုမှာ parameters (ပုံ2ကိုကြည့်ပါ .. ) ကို configure ဖို့လိုအပ်:
1) ခြေလှမ်း 1 (အဆင့် 1) - Windows နဲ့စနစ် disk ကို specify ။ အများအားဖြင့်ကမလိုအပ်ပါ, ထိုအစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကအတော်လေးလည်းမိတ္တူအတွက်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောကြောင်းအားလုံးသတ်မှတ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
2) ခြေလှမ်း2(ခြေလှမ်း 2) - backup လုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အပေါ် drive ကိုသတ်မှတ်ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်ကမတူညီတဲ့ drive, မသင် system install လုပ်ခြင်းထားတဲ့အပေါ်တဦးတည်း (မရမယ့်အတူတူ hard drive ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော partition ကိုအပေါ်နောက်ထပ်အလွန်မြင့်မားနှစ်လိုဖွယ်အစစ်အမှန် drive ကိုအပေါ်တစ်ဦးမိတ္တူကိုစောင့်ရှောက်ရန်စိတ်ဖိစီးမှု, များပြားရှုပ်ထွေး) သုံးစွဲဖို့အလွန်အမင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ (သင်လုံလောက်စွမ်းရည်နဲ့ flash drive ကိုရှိပါက) သို့မဟုတ်တစ်ဦးက USB flash drive ကို (ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရဲ့သူတို့ရရှိနိုင်ပါသည်ထက်ယခု Bole အဘိဓါန်ရှိပါတယ်) ဥပမာအနေနဲ့ external hard drive ကိုအဘို့, သုံးနိုင်တယ်။
setting များကိုသတ်မှတ်ခြင်းပြီးနောက် - ထို Start ကို backup လုပ်ထား button ကိုနှိပ်ပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပြန်သင်တောင်းနှင့်ကူးယူစတင်ပါ။ ဒါဟာဥပမာ, သတင်းအချက်အလက်၏ 30 GB ကိုနဲ့ငါ့ drive ကို ~ 20 မိဘို့ကူးယူခဲ့ကြသည်မြန်ဆန်အလုံအလောက်တက်တတ်၏။
သင်္ဘောသဖန်း။ 2. တက် Start
ငါထိုသို့ပြုမှဖြစ်စေ, တစ်ဦး bootable flash drive ကိုလိုအပ်ပါသလား?
သင် program ကို AOMEI Backupper နျ Standard run ကြောင့်ဒီပုံကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်က restore ရှိရာသတ်မှတ်လို backup ဖိုင်ကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်: ဒီနေရာမှာအဓိကအချက်ကဒီဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ Windows OS ကို boot လုပ်ဖို့လိုလျှင် - ထို့နောက်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်အရာမျှရှိပြီး run ။ ထိုအလျှင်သည်မဟုတ်လော ဤကိစ္စတွင်နှင့်နေရာလေးကို bootable flash drive ကိုခုနှစ်တွင်: သူမ၏ကွန်ပျူတာအားဖြင့်သင်တို့ကိုအရန်သင့်သိမ်းဆည်းဖွင့်နိုင်ကြသည်ပြီးတော့အဲဒီမှာ Program ကို AOMEI Backupper နျ Standard ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်နှင့်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး bootable USB drive ကဖန်တီးမဆိုအဟောင်း flash drive ကို fit မှ (ထို tautology လွှတ်မည်, 1 GB ကိုဥပမာ, လူများစွာ ... များစွာရှိပါသည်) ။
လုံလောက်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့။ AOMEI Backupper Standard တှငျ "Utilites" အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ, ပြီးတော့ Bootable မီဒီယာကိုဖန်တီးသည့် utility ကို run (။ ပုံကိုကြည့်ပါ။ 3)
သင်္ဘောသဖန်း။ 3. Bootable မီဒီယာ Create
ထို့နောက်ငါ (။ ပုံကိုကြည့်ပါ။ 4) "ကို Windows PE" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် Next ကိုခလုတ်နှိပ်ပါအကြံပြု
သင်္ဘောသဖန်း။ 4. Windows ကို PE
ကာလအချိန်ရောက်လာမည့်ခြေလှမ်းကိုသင် disk ကို Beech ချောင်းကို (သို့မဟုတ် CD / DVD ကို drive ကို specify နှင့်စံချိန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Bootable USB flash drive ကိုအစားအလျင်အမြန်နေသူများကဖန်တီး (1-2 မိ။ ) ။ CD / DVD ကို Drive ထဲတွင်ကျွန်မသူတို့နှငျ့အတူအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးကတည်းက (ကအချိန်ကြာမြင့်စွာမပြောနိုင်ပါဘူး) ။
backup တစ်ခုထဲကနေ Windows ကို restore လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါလမ်း, backup လုပ်ထား extension ကို ".Adi" (ဥပမာ, "System ကို Backup ကို (1) .Adi") နှင့်အတူပုံမှန်ဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်တင်ရေး function ကို run ဖို့ - ပဲ AOMEI Backupper အပိုင်း (ပုံ 5. ) Restore ကို run ခြင်းနှင့်သွားပါ။ ထိုအခါ (များစွာကိုအသုံးပြုသူများအလမ်းဖြင့်, ဒီအဆင့်မှာရှုံးနိမ့်နေကြသည်) ကို Patch button ကို click နှိပ်နှင့် backup လုပ်ထား၏တည်နေရာကိုရွေးပါ။
ထိုအခါနာလန်ထူ restore နှင့်စတင်ရန်တစ် drive ပေါ်တွင် program ရန်သင့်အားမေး၏။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသူ့ဟာသူ (အသေးစိတ်အတွက်သူမ၏အသိဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ဖော်ပြရန်) အလွန်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။ 5. Windows ကို Restore
စကားမစပ်, သင်တစ်ဦး bootable USB drive ကနေ boot လျှင် - သင် (အားလုံးစစ်ဆင်ရေးကြောင့်တူညီသောလမ်းအတွက်လုပ်) ကို Windows ထဲမှာစတင်ပါလျှင်သကဲ့သို့သင်တို့ကို, ကိုပရိုဂရမ်ထဲမှာအတိအကျတူညီမြင်လိမ့်မည်။
ငါလင့်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, သို့သော်, ကို USB drive ကနေ boot တက်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်:
- ဘယ်လို BIOS ကို setting များကိုရိုက်ထည့်ပါဖို့ BIOS ကို, ခလုတ်ကိုရ:
-, BIOS ဟာ bootable USB flash drive ကိုမမြင်ရပါဘူးဆိုရင်:
ဒါကဆောင်းပါးအဆုံးသတ်ထားသည်။ မေးခွန်းများနှင့်ဖြည့်စွက်အဖြစ်အမြဲကြိုဆိုပါတယ်။ Good Luck 🙂